Vechidiki Amai vaAmber Portwood vanoburitsa chikonzero nei akamisa muchato wake - Nhau
Kuru Varaidzo Style Nhau Blog
'Teen Mom' nyeredzi Amber Portwood anoratidza chikonzero nei akamisa muchato wake
Hukama hwaAmber Portwood naMat Baier hwapera zviri pamutemo (zvirinani kwenguva iripo) uye, zviripachena, kuti muchato wabviswa. Zvino, iyo 'Teen Amai' nyeredzi iri kuvhura pamusoro peiyo kupera kwerudo .
Amber akati zvese izvi zvakatanga muna Kubvumbi apo Matt, uyo ari kupora akapindwa muropa nezvinodhaka, akapa mumwe wake Catelynn Lowell Xanax kuti anyaradze tsinga dzake pazuva revapepeti re'Teen Mom '. Ichokwadi chekuti Matt aitova nemapiritsi paari chakatumira Amber kumucheto.
SirivheriHub / REX / Shutterstock
'Yaive yakanaka kwazvo mashanga akapwanya musana wengamera,' akadaro Isu Vhiki . 'Hatisi pamwe manje.'
chelsea peretti uye jorodhani peele
'Zvino' rinogona kuve izwi rakakosha, sezvo pave nemishumo yekuti iye naMat vari kutora vhidhiyo yeWE TV 'YeMuchato Boot Camp.'
chris sullivan izvi ndezvedu kurasikirwa uremu
'Ini ndinofunga kurapwa kwese kwaizobatsira,' akadaro.
Jen Lowery / Splash Nhau
Pamusoro pehukama hwavo, pakave nerunyerekupe kuti Matt anga asina kutendeka. Paive nerunyerekupe kuti iye ndiye akafa baba kune akati wandei vana. Ikoko kwaimbove nerunyerekupe rwekuti aiyedza kutamba nemumwe wake 'Amai Vechidiki' Farrah Abraham. Amber, zvakadaro, haatende zvese zvaanoverenga.
'Handitende kuti akandinyengera,' akadaro, asi akabvuma kuti anga asiri wechokwadi naye munguva yakapfuura. Zvakadaro, kuti iye afunge zvekudzokera kuna Matt, akatiudza Isu, panofanirwa kuve 'kusisina kunyepa, pasisina kutukirana.'
'Pane zvakawanda zvinoda kushandirwa isu kuti tifunge zvekuve pamwe chete,' anodaro. Haana kuve akakunda. Akangosangana nemunhu asingaitane ne [hupombwe hwake.] Asi akasanganawo nemunhu waanodanana naye chaiye uye asingade kuregedza. '
Kunyangwe asingaregi tariro yese yekumutsidzira murazvo, Amber akaudza mag, 'Panguva ino, ndakamuudza kuti zviri kwaari kuti aponese hukama uhu.'
blac chyna uye kupamba kurwa
Vaviri vacho vaive seta kusunga iro banga kudonha uku. Ivo zvakare vakagadzirirwa kuroora mu2016, asi muchato wacho waive 'pfekedza unopisa kumashure' sezvavakashanda kuburikidza 'nezvimwe zvinhu pamwechete.'
Ona Kim Zolciak-Biermann asina yake wigi kana yekuzora
Aimbove 'Runako uye Chikara' nyeredzi Estella Warren akasungwa nekuda kwekurova
bhiri murray uye selena gomez
sacha baron cohen mukadzi isla hove
Makumi mapfumbamwe evana vemamuvhi pane netflix
Bette davis faye anotiza johnny carson